एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको किसान लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? « नेपालबहस
एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको किसान लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७८, बुधबार १३:३१
काठमाडौं । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कम्पनीले १२ लाख ९८ हजार २५९ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेकोे हो । कम्पनीले उक्त एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृती पाएपछि मात्र कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीको चुक्तापूँजी ३९ करोड २८ लाख ८ हजार रहेको छ ।
एफपीओ निष्कासन गरेपछि कम्पनीको पूँजी ५२ करोड २६ लाख पुग्नेछ । कम्पनीले सूचीकृत नभएका कम्पनी गाभेका कारण शेयर संरचना मिलाउनु पर्ने कानूनी अवस्थाका कारण एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दिब्य लघुवित्त वित्तीय संस्था र किसान माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेपश्चात एकीकृत कारोबार शुरु गरेको हो । पछि कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार परिवर्तन भई किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको जानकारी गराएको हो ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ८ करोड ६६ लाख ४७ हजार नाफा कमाएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ५० लाख ११ हजार नाफा कमाएको थियो । गत आवको तुलनामा चालू आवको कम्पनीको नाफा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीले जगेडामा १८ करोड ३० लाख ३८ हजार सञ्चित गरेको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ४ अर्ब ५६ करोड ३२ लाख सापटि लिएर, १ अर्ब ११ करोड१ अर्ब ११ करोड ६६ लाख निक्षेप संकलन गरेर ५ अर्ब ६३ करोड २१ लाख कर्जा लगानी गरेको छ ।
त्यसैगरी सो अवधिमा कम्पनीले २ करोड २९ लाख १६ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । खराब कर्जा संकलनमा वृद्धि भएकाले पनि नाफामा बढ्न टेवा पुगेको हो । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २२ दशमलव शून्य ६,मूल्य आम्दानी अनुपात ७९ दशमलव १५,तरलता अनुपात ५२ दशमलव ९८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ १४६ दशमलव ६० रहेको छ ।
आउँदो आवमा पुनः सर्वसाधारणका थप शेयर निष्कासन र बोनस शेयर गरी चुक्तापूँजी ५५ करोड पु¥याउने योजना रहेको कम्पनीले वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
शेयरबजारमा उच्च शेयरमूल्य भएको महिला लघुवित्तले गर्यो चौथो त्रैमासमा ९ करोड २९ लाख मुनाफा, ईपीएस कति ?
साउन २२ गतेदेखि निष्कासन हुने सामलिङ्ग पावरको आईपीओमा आवेदन दिने मिति सर्यो
आजदेखि सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओमा आवेदन दिन सकिने